Midziyo Uye Rutsigiro Kugonesa Iyo Sangano Kuti Ishande Payo Peak Performance Yayo - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
agile kusimudzira chigadzirwa kuvandudza, bhizinesi analytics, Bhizinesi Njere
Kana iwe uchimhanya bhizimisi, you’ll know that administering a bhizimisi is as challenging a job as climbing Mount Everest. Businesses involve a plethora of roles, responsibilities, workloads, and pressure that must be combatted on a day-to-day basis. Not all businesses or startups actually reach the top because it is not easy out there.
Kubudirira bhizimisi requires hardworking, smart work, and great leadership qualities with a combination of humbleness. To combat the challenging task of getting your bhizimisi working at the peak, we have a range of equipment and support techniques that must be installed in your workplace so that the revenue is high and the growth higher.
Kuiswa kweGroup Technology
boka zvigadzirwa is an update in the field of management. There are applicationsx and Software available to organize work on a calendar and assign them to responsible people at the same time. This Software lets the entire workforce be technically connected and makes them known to the entire chain of workflow.
Izvi zvinobatsirawo mukuchengetedza kutaurirana kwakanaka uye kudzivirira kunonoka kwebasa. Vashandi vanogona kunyatsoziva basa ravo uye nemisi yakatarwa, zvichitungamira kune yakanaka tsika tsika uye zvinofambiswa panguva.
Kudzidza Chiitiko Platform
Organizations have been using a kudzidza experience platform to deliver informative methods to the employees as a training program. With the onset of the digital world, everything kind of seems to be stepping on the Indaneti, but how organizations make use of it makes all the difference.
A kudzidza experience platform is used to make and deliver important lessons to the employees to upgrade their skills, personality, professionalism, etc. All these have proven to be great for peaking workforce performance.
If gutsikana management is your niche, then installing an authoring tool in your workflow system is a necessity. These tools and Software enable the organizational workflow to be effective and in a very organized way. These tools have special administrative features that enable the users to create specific settings for ideal use.
Workflow manejimendi yakaitwa nyore nyore nekushandisa kweese aya maturusi ayo akonzeresa mukuita kwepamusoro kwe manejimendi. Zvakakosha kuwana rubatsiro kubva Sangano Dhizaini maAdvista kuitira kuti kufambiswa kwebasa kutarisirwa zvakanaka.
Kuvaka yakanaka tsika tsika
Pamwe pamwe nehunyanzvi hwekutarisira masangano kuti aite nemazvo, zvakakoshawo kuti utarise kune zvepfungwa uye zvemagariro zvesangano. Vaka yakasimba tsika tsika yakazadzwa nehukama kuitira kuti vashandi vasanzwe kuremerwa asi vafarire basa ravo. Izvi zvakakosha zvikuru uye zvinofanirwa kuiswa mumasangano pazviyero zvikuru.
Imwe nzira inobatsira kwazvo yekutora yepamusoro kuita mumasangano ndeye kuburikidza neane tarenda manejimendi. Izvi hazvingorevi chete nekuisa vashandi pakudzidziswa asi zvakare zvinoda kuti masangano ashande mukusimudzira kwevashandi mune zvehunyanzvi uye zvega nzira.
Izvi zvinogona kusanganisira kukwidziridzwa muhoro, kuonga kuita senge mibairo uye zvitupa, kubatanidzwa mune zvisarudzo zvakakosha, uye kurudziro yakakodzera nguva. Zvese izvi zvakakosha uye zvishandiso zvikuru zvekuita manejimendi.
Tarenda manejimendi inzira yekukurudzira vashandi kuti vashande, asi mamaneja, varairidzi vepamusoro-soro, kana vashandi vane basa rekuraira vashandi vepazasi. Ichi chiitiko chakakosha-chakatarwa chinoshanda uye chinofanirwa kushandiswa mumasangano ese. Mamaneja kana vashandi vepamusoro-soro vanofanirwa kuve nekudyidzana nevamwe vashandi.
Uku kudyidzana hakufanirwe kunge kuri chete padanho rehunyanzvi, asi kazhinji zvinofarirwa kuzviita. Kana vanobudirira vepamusoro-soro vashandi vachirovedza vepazasi-vanoshuvira vashandi, sangano harisi kungozvivakira ramangwana ravo chete asiwo kubatsira vashandi kuti vape zvavanogona, zvichitungamira mukuita kwepamusoro.
Kukurudzira vashandi kuti vaite zvirinani zvinogara zvichitarisirwa uye zvichiratidzwa kuti ndeimwe yenzira dzakanakisa dzinoshandiswa nemasangano kushandira kuita kukuru basa. Iyi kurudziro inoitwa nekurumbidza, kusimudza, nezvimwewo Asi nzira yakajairika uye yakakosha yekukurudzira vashandi ndeyekuvapa.
Gamification ndiyo nzira yekupa vashandi basa ravo mukambani kana musangano.
Iyi mibairo haisanganisiri kungosimudza uye kuongororwa. Izvi zvinoitwa nekuburitsa mukombe uye kurega vashandi vese vazive kuti mushandi akaita zvakanakisa mune imwe ndima. Izvi hazvikurudzire chete ari kupa mubairo asiwo zvinokurudzira vamwe vashandi kuti vawedzere zvavari.
Mushandi wesangano rakasarudzika anofanirwa kuziva izvo chaizvo zvinoda kambani kubva kwavari. Nekudaro, kuita kuti mushandi anzwisise zvinotarisirwa nekambani kubva kwavari, sangano rinofanira kuseta zviyero. Aya matanho anosanganisira mhando yebasa, misimboti mutsika yekushanda, uye kuranga mukati mehofisi.
Aya matanho anozoona kuti mushandi ari kushanda nepavanogona napo kuti aunze chaizvo izvo zvaanofanirwa kuita. Panogona kuve nenguva apo mushandi anonamira pabasa otadza kuendesa basa remhando yepamusoro. Muzviitiko izvi, kumisikidza zviyero zvinoita kuti zvive nyore kuti sangano riite kuti vashandi vazvidavirire.
Kutaurirana ndiko kiyi
Uyu mutsara unofarirwa uye unoshanda mune dzese pfungwa. Kutaurirana kwakanaka kunotungamira mukushanda kwakanaka kwesangano. Huru kana diki, hapana sangano rinokwanisa kubhadhara zvisirizvo uye basa risiri iro. Uku kukanganisa kukuru kunogona kuvhara mabhizinesi. Nekudaro, chaiyo nzira dzekutaurirana dzinofanirwa kumisikidzwa.
Iko kushandiswa kweiyo tekinoroji mumabhizinesi kwakadzikisira chiteshi chekutaurisa zvakanyanya. Asi, idzi migero dzinogona zvakare kutungamira mukusafambisa zvakanaka. Nekudaro, sekambani, ibasa rako kushandisa tekinoroji nemirayiridzo yakapihwa zvakanaka kutaura nevashandi.
Tarisa pane vatengi
Mushure mezvose, chikamu chikuru chinoita kuti chero sangano riende mutengi. Nekudaro, ndicho chakanyanya kukosha kufarira kudzidza zvinodiwa nevatengi, kukura nhamba, and deliver target materials. This is the most essential part of any bhizimisi that is necessary to keep the employees working and get the performance at peak.
Kana zvinodiwa nevatengi zvakakwirira, vashandi vanoshanda kuti vavasunungure, zvichitungamira mukukwirisa kwesangano rese.